औषधिको ५०% सम्म तर्कहीन प्रयोगले भयावह बन्दै मानव स्वास्थ्य, रोगको तेस्रो कारण औषधि – Health Post Nepal
औषधिको ५०% सम्म तर्कहीन प्रयोगले भयावह बन्दै मानव स्वास्थ्य, रोगको तेस्रो कारण औषधि
२०७६ असार ८ गते १०:०३
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि औषधिको ५० प्रतिशतसम्म प्रयोग तर्कहीन वा विवेकहीन रूपमा हुने गरेको छ । कुल औषधि प्रयोगको आधा मात्र रोगअनुसारको आवश्यकतामा हुने गरेको तथ्यांकले मानव स्वास्थ्यमा औषधिले पारिरहेको असरको भयावह अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विज्ञका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने औषधिको यति ठूलो परिमाणको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा अकल्पनीय जोखिम निम्त्याइरहेको छ । यतिसम्म कि, रोगका प्रमुख कारणमध्ये तेस्रो ठूलो हिस्सा औषधिले ओगटेको छ । अर्थात्, रोग लिएर औषधोपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने तथा ज्यान गुमाउने बिरामी संख्यामा तेस्रो ठूलो संख्या औषधिपीडितको छ ।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधिको तर्कहीन प्रयोगले नेपालमा मात्र नभई संसारभर नै मानव स्वास्थ्यले आघात भोगिरहेको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार नेपालमा यकिन तथ्यांकीकरण नै नहुने भए पनि यसको अवस्था झन् भयावह छ । यो त औषधि गुणस्तरीय भएर पनि हचुवामा गरिने प्रयोगले निम्त्याइरहेको समस्या भयो । नेपालमा प्रयोग भइरहेका न्यून गुणस्तरका औषधिको असरको कल्पना गर्ने हो भने अवस्था झनै विकराल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘औषधिको ५० प्रतिशत प्रयोग इर्यासनल हुने गरेको अध्ययन–अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्, जुन भयावह अवस्था हो,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘औषधिकै कारण हस्पिटलाइजेसन हुनुपर्नेको संख्या तेस्रो नम्बरमा भएको अनुमान छ ।’
उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् ।
उत्पादनपछि औषधि उद्योग, सप्लायर, होलसेलर तथा फार्मेसीले सही रूपले भण्डारण नगर्नाले वा मापदण्डविपरीतका काम गर्नाले औषधि विषमा परिणत भइरहेका उदाहरण यत्रतत्र भेटिने गरेका छन् । धेरै फार्मेसीले डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनविनै किराना सामान बेचेसरह औषधिको बेचबिखन गरिरहेका छन् । ‘फार्मेसीले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्नाले विभिन्न रोग निम्तने तथा उपचार नै नलाल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘असरको मूल्यांकन भएको छैन । भण्डारण र व्यवस्थापन पक्षले औषधिको गुणस्तर कायम गर्नमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।’
पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोड्यो, न त नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा आएका छन् : स्वास्थ्यराज्यमन्त्री
पछिल्लो ३५ वर्षमा नयाँ एन्टिबायोटिक नेपालमा नआएको र पुराना एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार हचुवाका भरमा गरिने एन्टिबायोटिकले रेसिस्टेन्स हुन गई काम गर्न छोडेको हो । यादवले भने, ‘अस्पताल पुगेका बिरामीले औषधिले काम नगरेका कारण मुत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
औषधिको भण्डारणमा समस्या भएका कारण पनि औषधिले आवश्यक काम नगर्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा रहेका फार्मेसीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने काठका र्याकमा औषधि राखिएका हुन्छन्, जहाँ अत्यधिक प्रकाशका किरण तथा घाम परेका हुन्छन्,’ राज्यमन्त्री डा. यादवले भने, ‘जब कि, औषधिमा खेलिएको हुन्छ, घामबाट औषधिलाई टाढा राख्नुहोस् । त्यस्ता औषधि न्यून गुणस्तरयुक्त हुने भएका कारण मानव शरीरमा त्यसको असर परिरहेको छ ।’
‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
जनस्वास्थ्य प्रादेशिक संरचना भएको बताउँदै मन्त्री डा. यादवले स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने बताए । उनले आफू सरकारमा आउनुअघि नै क्षयरोग तथा कुष्टरोग सहायकको सिट काटिएका कारण क्षयरोगीको अवस्था भयावह भएको बताए । मन्त्री यादवले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले, स–साना विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहलाई शसक्तीकरण गरेको खण्डमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उनले फार्मेसीमा भण्डारणको अवस्थाबारे जिल्ला संयोजकको टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले ७ सय ५३ पालिकाले सरकारसँग मिलेर कामको फिडब्याक लिनुपर्ने बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका औषधि पसलका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी स्वास्थ्य संयोजक भवानी दाहालले स्थानीय तहलाई कामको बोझ तथा अधिकार मात्र दिइएको तर प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण अभाव रहेकाले सेवा दिन अप्ठ्यारो परिरहेको गुनासो गरिन् ।